Layaabka Dunida: Huteel Marka Ay Macaamiishu Soo Galaan Ee Ay Cuntada Dalbanayaan Dhammaan Dharka Oo Dhan La Iska Dhigayo, Layaabkeeda Iyo Dalka Ay Ku Taallo!! | Raadgoob
Xaqiiqanimo si kasta oo dunidan maanta aynu ku nool nahay u sii horumarayso oo dalal badan oo adduunka ahi horumar ka samaynayaan dhinaca tiknoolajiyada iyo aqoonta haddana waxa isa soo taraya oo sii socda sida uu qiyamka iyo wanaaggu u sii lumayo ee ay dunida hore u martay uga sii fogaanayso wanaagga iyo kala garashada waxa wanaagsan iyo waxa xun.
Marka aanay shucuubta adduunka ku nooli lahayn diin iyo qiyam iyo mabaadii’ wanaagsan oo ay wax ku kala gartaan waxa ay noqonaysaa tan oo kale iyo in wixii xumaa uu ula muuqdo wax wanaagsan oo kale.
Akhristow, haddii qaawanidu ahayd wax laga xishoodo oo dadku cawradooda ku astruri jireen dhar waxa maanta soo baxaysa in qaawanaantii ay noqonaysaba wax hab-nololeedkooda ka mid ah.
Shabakadda caanka ah ee BBC ayaa soo warinaysa in waddanka Faransiiska laga hir geliyey Huteel weyn oo laga cunteeyo kaasi oo marka dadku ay cuntada iyo cabitaanka dalbanayaan ay sharci tahay in dhammaan dharka oo dhan dadku iska dhigaan oo ay mudh iyo gacan noqdaan kadibna iyaga oo qaaqaawan kuraasta iyo miisaska ay fadhiyaan cuntada iyo cabitaannada ay ka dalban karaan!!.
Waa arrin Mucjiso ah, waxaana jira dad siyaabo kala duwan u qanacsan noloshooda, sababtoo ah waxaad arkeysaa waxaan weli la maqlin. Caadiyan waxaan aragnaa makhaayado si caadi ah loo cunteeyo inkastoo meelaha qaar ay jiraan in dumark iyo ragga la kala saaro.
Balse sheekaddu ka duwan sidaa!!!
Mid kamid ah makhaayadaha ugu caansan ee ku yaala France, ayaa la sheegayaa in dharka la wada dhigto makhaayaddaasi xilliga laga wada cunteeynayo waana waxa ugu yaabka badan ee hadda la arkay.
Mike iyo Stephane Saada waa milkiiliyasha makhaayaddan waxaana ay sheegeen in aragtidan ay hirgeliyeen sannadkii aan soo dhaafnay ee 2016. “Inta badan dadku waxay halkan iskugu yimaadaan xilliga fasaxa,” ayuu yidhi Mike oo kamid ah mulkiiliyaasha makhaayaddan. Muhiimaddayadu waa in nasiino fiican ay helaan dadku, waxaana yimaada asxaab isku qanacsan, waxa ugu muhiimsani waa nasiino, waxaa u diyaarsan miisas, sidoo kale cuntadii,” ayuu hadalka ku daray Stephane Saada.
Sida BBC-du sheegayso Mulkiiliyaashani iyagaa si gaar ah ugu adeega dadka gaarka ah, balse iyagu waxay xidhan yihiin dharkooda sida aad ka arki karto warbiixnta BBC-du warbiixntan ka samaysay balse dadka ay u adeegayaan dhammaantood waa kuwo qaawan oo mudh iyo gacan ah taasi oo noqotay qiso fajaciso ku noqotay adduunka.